Kumuu ahaa ninka baxsadka ah ay sida weyn ugu raad joogtay dowladda Shiinaha? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Kumuu ahaa ninka baxsadka ah ay sida weyn ugu raad joogtay dowladda...
Zhu Xianjian ayaa lagu raad joogay muddo 40 maalmood ah
Booliska Shiinaha ayaa dib u qabtay nin u dhashay Kuuriyada Waqooyi ka dib markii uu si geesinimo leh uga baxsaday xabsi ku yaalla Shiinaha, ninkan ayay booliska ku raadjoogeen muddo 40 maalmood ah.
Ninkan oo 39 jir ah, ayaa magaciisa lagu sheegay Zhu Xianjian, waxaana mar kale la xiray Axaddii, sida lagu sheegay bayaan kooban oo ka soo baxay booliska Shiinaha.
Zhu ayaa lagu xukumay xabsi ku yaala magaalada Jilin ka dib markii uu u soo baxsaday dalka Shiinaha sanadkii 2013-kii.
Lacag aad u badan ayaa loo ballan qaaday ciddii keenta macluumaad horseedi kara in lasoo qabto ninka baxsadka ahaa.
Muuqaalo ay baahisay warbaahiinta ay dowladda maamusho Beijing News ayaa lagu arkayay Zhu Xianjian oo fuulaya dusha sare ee xabsiga ka hor inta uusan ka gudbin xayndaabka koronto ee xabsiga, sidaas ayuuna xabsiga uga baxay.
Muuqaalka wuxuu sidoo kale muujinayay ilaalada xabsiga oo isku dayaya inay ceyrsadaan Zhu.
Baxsashada ninka ayaa dhalisay howlgal ballaaran oo la doonayay in lagu soo qabto taas oo dareen xooggan ka abuurtay baraha bulshada ee Shiinaha.
Maamulka Shiinaha ayaa kordhiyay lacagta abaalamrinta ah ee loo ballan qaaday dadka keena xog horseedi karta qabashada ninkan, waxay lacagtaas gaareysay $109,000 oo doolar.
Markii la qabtay kadib, muuqaal uu baahiyay teleefishinka maxalliga ah ee Jilin ayaa muujinayay Zhu oo uu rafaad ka muuqdo xilli uu jiifay dhulka isaga oo katiinadeysan.
Zhu ayaa markii hore loo xiray eedeymo la xiriira in si sharci darro ah uu ku soo galay Shiinaha, anshax xumo, iyo falal dhac ah ka dib markii uu ka soo baxsaday Kuuriyada Waqooyi.
Warbixin laga helay maxkamadda ayaa sheegeysaa in ninkan uu ka soo gudbay wabi kala qaybiya Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha sannadkii 2013-kii, wuxuuna u dhacay guryo badan oo ku yaalla tuulo u dhow halkaas, isagoo xaday lacag, taleefanada gacanta iyo dhar.
Waxa uu sidoo kale toori ku dhaawacay haweeney da’ ah oo aragtay isaga xilli uu isku dayay in uu ku baxsado baabuur taksi ah ka hor inta aysan soo xirin booliska.
Zhu waxa uu dhamaystay sagaal sano oo xabsi ah, dadka qaar waxay isla dhexmarayeen in sababta uu baxsaday ay aheyd cabsi uu ku qabay in la sii daayo oo dib loogu celiyo dalka Kuuriyada Waqooyi.
Shiinaha ayaa Kuuriyada Waqooyi dib ugu celiyaa dadka kasoo baxsada halkaas inkasta uu qeyb ka yahay heshiiskii Qaramada Midoobay ee qaxootiga ee 1951-dii kaas oo dalalkii saxeexay ku waajibinaya in aysan dib u celin qaxootiga haddii ay halis kala kulmi karaan tallaabadaas.
Shiinaha wuxuu dadka kasoo baxsada Kuuriyada Waqooyi u arkaa tahriibayaal si sharci darro ah kusoo galay dalkooda, waxay arrintaas u horseedeysaa inay ula dhaqmaan sida dambiilayaal.
Guddiga baaritaanka xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey wuxuu sanadkii 2014 sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay mas’uul ka tahay xaadgudbyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo dambiyo dagaal.
Previous articleSuxufiga siyaasiga noqday ee yuusuf garad oo farta ku fiiqay boqor buur madow kana dalbaday in uu raaligalin siiyayo
Next articleSuudaan oo u hanjabtay Ethiopia sheegatyna inay ka argoosan doonto kuwii ciidankeedankeeda laayay